Why Zimbabwean football is struggling - The Zimbabwe Mail
HomeOpinionWhy Zimbabwean football is struggling
Why Zimbabwean football is struggling
March 24, 2018 Staff Reporter Opinion, Sports 0
Goal takes a look at why Zimbabwean football has continuously struggled despite having some of the best players on the continent.
The football’s association in the country, the Zimbabwean Football Association (Zifa), are the custodians of the game in the country but they have also had their fair share of troubles in as far as leadership is concerned.
The outspoken boss took office in December 2015 and there are countless scandals that have rocked the Zimbabwe’s FA and perhaps he should consider stepping down and allow a new leadership to take the baton and run with it.
The South African Premier Soccer League is a beneficiary in this case – they are not the only though.
Until Chiyangwa or a new leadership takes office, that is when Zimbabwean football will take off and restore pride in their die-hard fans and beyond the borders. – This article was first published by Goal